चिसोमा बच्चालाई टन्सिल हुने समस्या छ ? यसको लक्षण र उपचार विधि यस्तो छ Canada Nepal
Mar 06 2021 | २०७७, फाल्गुण २२गते
२०७७, फाल्गुण २२गते
मेलम्ची खानेपानीको काम सम्पन्न नगर्न धेरै कोशिस भए तर म डगमगाईन :प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार ‘कोभिशिल्ड’ लगाउने
नेकपा संसदीय दलको बैठक सम्पन्न, ११५ सांसदको उपस्थिति
तीन हजार ५३५ परीक्षणमा ४७ जना सङ्क्रमित, ६२ सङ्क्रमित निको
तातोपानीको पर्यटन व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कियो
देश पूर्ण शान्तिमा रुपान्तरण भएकाले पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्छ : पर्यटनमन्त्री
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मुस्कान खातुनलाई बधाई
चिसोमा बच्चालाई टन्सिल हुने समस्या छ ? यसको लक्षण र उपचार विधि यस्तो छ
क्यानाडानेपाल माघ १८ २०७७
काठमाडौँ। चिसो हरेक रोगको कारण हो । चिसोको समयमा धेरै रोगले संक्रमण गर्छ । खासगरी नवजात शिशुलाई चिसोबाट बचाउन सक्नुपर्छ । चिसोमा बच्चालाई टन्सिलले धेरै सताउँछ । टन्सिल गलामा हुने यस्तो संक्रामक रोग हो, जसले नवजात शिशुलाई आफ्नो सिकार बनाउँछ । टन्सिल भएपछि गलाको भित्री भागमा पोल्ने र दुखाई महसुस हुन्छ । जसका कारण खानपिनमा निकै समस्या हुने गर्छ । कहिलेकाहीँ त टन्सिल भएपछि बोल्न र थुक निल्नसमेत गाह्रो हुन्छ । गलाको भित्री भागमा हुने टान्सिलाइटिसले हाम्रो मुखबाट भित्र जाने भाइरस र ब्याक्टेरियाबाट रक्षा गर्छ । तर, कहिलेकाहीँ यो आफ्नै कारण इन्फेक्सनको सिकार हुन्छ । यही इन्फेक्सनलाई टन्सिल हुने भनिएको हो । यो समस्या धेरैजसो बच्चामा देखिने गर्छ ।
टन्सिलको लक्षण के कस्तो हुन्छ ?
गलामा घाउ देखिनु
गलामा दुखाईका साथै ज्वरो आउनु
श्वासबाट गन्ध आउनु
खाना खाँदा वा पानी पिउँदा दुख्नु
खानाको स्वाद नआउनु
के कारणले हुन्छ टन्सिल ?
टन्सिल विभिन्न कारणले हुन्छ । टन्सिल्स कमजोर हुनु, इम्युनिटी कमजोर हुनु, धेरै गर्मी र मसालेदार खाना, निकै चिसो खाना तथा मुखको सफाइ नगर्दा टन्सिल हुने गर्छ । धेरैजसो पेट दुखाई हुँदा, कब्जियत हुँदा, प्रदूषण र धूलोले पनि टन्सिल हुने गर्छ ।
टन्सिलको उपचार यसरी गर्न सकिन्छ
टन्सिलको उपचार घरमै गर्न सकिन्छ । हरेक दुई घन्टामा तातोपानीमा नुन हालेर कुल्ला गर्ने । यदि टन्सिल हुनुमा ब्याक्टेरिया इन्फेक्सन कारण रहेको छ भने इन्टिबायोटिक औषधिबाट उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पटक–पटक हुने टन्सिल, क्रोनिक टन्सिल र ब्याक्टेरियाबाट हुने टन्सिलको उपचार शल्यक्रियाका माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । टन्सिलले पोल्ने, दुख्ने गर्दा सास लिन र फेर्न अप्ठेरो हुन्छ ।
टन्सिलको उपचार गर्ने घरेलु उपाय
हर्बल चिया पिउनाले टन्सिलको समस्याबाट छिट्टै छुटकारा पाइन्छ । टन्सिलका कारण टान्सिलाइटिसमा संक्रमण देखिन्छ, हर्बल चियाले ब्याक्टेरिया र कीटाणुलाई विस्तारै हटाउँछ, जसले गलामा पोल्ने र दुख्ने कम हुन्छ । हर्बल चिया बनाउन ग्रिन टीमा ल्वाङ, इलाइची र दालचिनी मिलाएर पिउन सकिन्छ । यसका साथै अदुवा र मह हालेर चिया खाने गरेमा पनि टन्सिल कम हुन्छ ।
दालचिनीमा दुखाई कम गर्ने र महमा इन्टिबायोटिक गुण हुन्छ । यी दुवै टन्सिल रोगका लागि फाइदाजनक हुन्छ । थोरै दालचिनीको धूलोमा एक चम्चा मह मिलाएर दिनमा तीनचोटि खाने गरेमा टन्सिलको संक्रमणबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
माघ १८, २०७७ आइतवार १७:१३:०४ बजे : प्रकाशित
# चिसोमा बच्चालाई टन्सिल
दैनिक एक घन्टा दौडनुस्, हुन्छन् यति धेरै फाइदा
काठमाडौँ। स्वस्थ रहनाका लागि दौडनु निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसबाट शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रोग पनि निको हुन्छ । साथै, रक्तसञ्चार र इम्युन सिस्टम पनि मजबुत हुन्छ । दिनहुँ दौडनाले मांसपेशी र हड्डी बलियो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसले केही दिन दौडेर बीचमै छोड्छन् । यो सरासर गलत हो ।
कसरी गर्ने दौडको सुरुवात ?
दौडनुअघि त्यसको तयारी गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । यदि तपाई दिनहुँ दौडने हो भने जुत्ता, स्ट्राइडस र सर्टको प्रयोग गर्नुहोस । सुरुमा तीव्र ढंगले दौडनोस् । चार मिनेट दौडेपछि एक मिनेट आराम गर्नुहोस् । यो प्रक्रिया चार पटकसम्म गर्नुपर्छ ।
एकैचोटि दौडनु हुन्न । सुरुमा वार्मअप गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसले शरीरमा गर्मी हुन्छ । थाई मजबुत हुन्छ । जसका कारण तपाई धेरै समय दौडन सक्नु हुन्छ । दौडनुअघि स्ट्रैचिङ, स्किपिङ, हाइजम्प तथा वैकडर्स जस्ता वार्मअप उपयुक्त हुन्छ ।
डाइटको ध्यान राख्नुपर्छ
दौडका साथै स्वस्थ डाइटको पनि जरुरी हुन्छ । फलफूल, सब्जी, दूध, मासु र माछा खाने गर्नुपर्छ । यसले शरीरमा ऊर्जा प्राप्त गर्छ । फास्टफुडबाट भने टाढै रहनुपर्छ किनभने यसले स्टामिनामा असर गर्छ ।
यदि तपाईलाई एक्लै दौडन मन लागेन, बोर लाग्यो भने साथीभाइसँग दौडने गर्नुस् । यसबाट तपाईको दौडने कलामा विकास हुन्छ ।
दौडदा कति क्यालोरी नष्ट हुन्छ ?
दौडनु शरीरलाई निकै फाइदाजनक हुन्छ । एक घन्टा दौडँदा ६ सय ग्राम क्यालोरी नष्ट हुन्छ । जसबाट तौल तीव्र रूपमा कम हुँदै जान्छ ।
के के फाइदा हुन्छ त ?
इम्युन सिस्टम मजबुत
दिनहुँ दौडदा इम्युन सिस्टम मजबुत हुन्छ । जसबाट सामान्य विरामी जस्तै एलर्जी, ठण्डी, खोकीबाट बचाउँछ ।
मधुमेहबाट नियन्त्रण पाउन दिनहुँ कम्तीमा १५–२० मिनेट दौडनु जरुरी हुन्छ । दौडदा इन्सुलिन बन्ने प्रक्रियामा सुधार आउँछ र रगत सञ्चारमा नियन्त्रित गर्छ ।
हार्ट अट्याकको सम्भावना कम गराउँछ
एक अध्ययनअनुसार दिनहुँ १० मिनेट दौडदा हार्ट अट्याकको सम्भावना कम हुनेछ । दौडने बेला मुटुको धड्न बढ्छ, जसले गर्दा मुटुले धेरै रगत पम्प गर्छ । त्यसबेला रक्तनलीमा लचिलोपन हुने भएकाले मुटुका रोगीलाई हर्ट अट्याकको सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
तनावबाट टाढा राख्छ
दौडनाले मातसिक तनावबाट मुक्त राख्छ । दौडनाले शरीरमा एन्डार्फिन नामक केमिकल बग्ने गर्छ । जसले मानिसलाई तनावमुक्त राख्न सहयोग गर्छ ।
कोलेस्ट्रोल कम गर्छ
दौडनाले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ । यसले मानिसलाई धेरै रोग लाग्नबाट बचाउँछ ।
पाचनसम्बन्धी समस्या हटाउँछ
दौडनाले अत्यधिक पसिना निस्किन्छ । पसिना निकाल्ने मेटावालिज्मको दर धेरै उत्सर्जन गराउँछ । यसबाट धेरै भोक लाग्छ । भोक लाग्न थालेमा पाचन क्रिया सन्तुलित रहन्छ ।
फाल्गुण १०, २०७७ सोमवार १२:४७:१२ बजे : प्रकाशित
# दैनिक एक घन्टा
पौष्टिकतत्वले भरिपुर्ण कोदो खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा
काठमाडौँ। विश्वको एक प्रमुख अन्न बाली हो, कोदो । यसको रोटी, ढिंडो लगायतका परिकार बनाइन्छ। कोदोबाट जाँड, रक्सी पनि बनाइन्छ । ग्रीक खाद्यान्न देवी ‘एल्युजिन’-को नामबाट यसको उत्पत्ति नाम इल्युजिन भएको हो। यसको साझा अङ्ग्रेजी नाम ‘फिंगर मिलेट’ फूलडाँठमा औंलाजस्तै बालाको झुप्पा आउने भएकोले त्यसैबाट आएको हो। यो कडा मेहनत गर्ने श्रमजीवी मानिसहरूको रुचिकर खाद्य हो भने मधुमेह (डायबेटिज)-को रोग लागेको मानिसको लागि पनि यो निकै उपयोगी हुन्छ।
समुद्रसतहदेखि १८०० मिटर उँचाइसम्ममा यसको खेती गर्न सकिन्छ। यसमा क्यालसियम, फस्फोरस रआइरनको मात्रा प्रचुर हुन्छ। केही पहाडी क्षेत्रमा यो सानो खाद्यान्नको रूपमा उब्जाउ गरिन्छ, जसलाई अन्न र गाईवस्तुको आहार दुवै हिसाबले उत्पादन गरिन्छ। । यो गर्भवती महिलाको निम्ति उत्तम हुन्छ अनि विभिन्न उमेरका वयस्क मानिसका लागि परिवर्तित खाद्यको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। यसको पीठोले रोटी वा ढिंडो बनाइन्छ। यसको नल पशुको राम्रो आहार मानिन्छ। यो एक बर्खे बाली हो।
कोदो मात्र यस्तो अन्न हो जसमा घून र किराहरूले कुनै नोक्सान पुगाउन सक्दैन । यसलाई चिसो र सुखा ठाउँमा राख्यो भने धेरै वर्षसम्म बिग्रदैन । प्रायः नेपालमा कोदोको खेती गर्ने दुईवटा तरिका अपनाइएको पाइन्छ । पहिलो तरिका जमिनलाई राम्ररी जोतखन गरी कोदोको बिउ छर्ने गरिन्छ भने दोश्रो तरिका पहिले बेर्ना उमारी पछि उखेलेर अर्को ठाउँमा रोप्ने गरिन्छ ।
कोदो खेती गर्दा परिश्रम भने कडा गर्नु पर्दछ । कोदो एक वर्षेबाली भएकाले छरुवा कोदो गोड्न निकै धामा पर्दछ भने रोपुवा कोदो रोप्न धामा पर्छ । जेठको दोश्रो हप्ता देखि असारको पहिलो हप्ता भित्रमा कोदो छर्ने उत्तम समय मानिन्छ । असारको अन्तिम हप्ता देखि साउनको पहिलो हप्ता भित्र छरुवा कोदो गोड्ने तथा रोपुवा कोदो रोप्ने उत्तम समय हो । त्यस पछि पनि भदौ नलाग्दै कोदो एक पटक गोड्नु पर्दछ । कात्तिक कोदो पाक्दछ ।
कोदो पाकेपछी बाला र नल छुट्टा छुट्टै काट्नु पर्छ । बाला राम्ररी सुके पछि लठ्ठीले चुटेर अथवा गोरु घुमाएर कोदो माडिन्छ । नल काटेर सुकाउनु पर्छ । नल राम्ररी सुखे पछि ओभानो ठाउँमा राखेर पछि गाई वस्तुलाई घाँस बनाइन्छ ।
कोदो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । यो सजिलै पच्दछ । यसमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फस्फोरस, म्यागनिज, भिटामिन बी, टिप्टोफेन, फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्टलगायतका पोषक तत्त्व हुन्छन् । केही व्यक्ति ग्लुटेन प्रति संवेदनशील हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिका लागि कोदो राम्रो विकल्प हो । कोदो खाए शक्ति मिल्दछ । यो ऊर्जाको राम्रो स्रोत हो ।
यसबाहेक तौल घटाउनसमेत कोदो खानु राम्रो मानिन्छ । कोदो खाएको धेरै समयसम्म भोक लाग्दैन, जसले गर्दा तौल नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ । मुटुका रोगीहरूका लागि कोदोको रोटी खानु धेरै लाभदायक हुन्छ ।
यसमा प्रशस्त मात्रामा नियासिन हुन्छ, जसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर घटाएर मुटु रोगको जोखिम पनि कम गर्छ । यसबाहेक यसमा भएको पोटेसियम र म्याग्नेसियमले रक्तचाप नियन्त्रण राख्न सघाउँछ ।
कोदामा प्रशस्त मात्रामा भएको क्याल्सियमले हाड बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यसमा आइरनसमेत निकै हुन्छ, जसले गर्दा रगतको कमीले हुने रोगले छुन पाउँदैन । पेटको स्वास्थ्यका लागि कोदोको सेवन धेरै लाभकारी मानिन्छ ।
कब्जियत र ग्यासको समस्या भएकाहरूले नियमित रूपमा कोदोको रोटी वा ढिडो खाने गरे आराम पाइन्छ । केहि अध्ययनका अनुसार कोदो क्यान्सरबाट बचाउन पनि सहयोगी हुन्छ । यसको नियमित सेवनले मधुमेहको खतरासमेत कम हुन्छ ।
फाल्गुण ९, २०७७ आइतवार ११:३७:१५ बजे : प्रकाशित
गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ ? बेहोस हुने समस्यालाई वीर्यले कम गर्ने
काठमाडौं । अधिकांश दम्पत्ति गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क गर्न हुने वा नहुने विषयले चिन्तित् रहने गर्छन् । गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क राख्दा शिशु र महिला दुवैलाई नकारात्मक असर गर्ने बुझाइ आम दम्पत्तिमा पाइन्छ । यसलाई स्वभाविक चिन्ता पनि मान्छि । गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क राख्दा पाठेघर खुम्चिनेदेखि शिशुलाई छोपेर राखेको झिल्ली च्यातिएर संक्रमण हुनेसम्मको तर्क हुने गर्छ ।
गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क
स्वस्थ गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क राख्न सकिन्छ । स्वस्थ गर्भावस्थामा हुने यौन सम्पर्कले महिला तथा गर्भमा रहेको शिशुमा नकारात्मक असर नगर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
गर्भवती महिलाले इच्छा गरेमा वा उनलाई कुनै असजिलो महसुस नभएमा यौन सम्पर्क राख्न अफ्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । तर, यसबेला पुरुषले यौन सम्पर्कका लागि दबाब दिनु भने हुँदैन ।
यौन सम्पर्कले आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुने
यौन सम्पर्कले दम्पत्तिबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने गर्छ । तर, गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क नहुँदा सम्बन्धमा बिग्रिने डरमा महिलाहरु रहेका देखिन्छन् । गर्भवती अवस्थामा पनि कुनै न कुनै रुपमा दम्पतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्न असल सञ्चारको आवश्यकता पर्ने गर्छ ।
यसका लागि गर्भावस्थामा पनि यौन क्रियाकलाप आवश्यक पर्छ । तर, यसका लागि गर्भ रहेको कति महिना भयो भन्नेले अर्थ राख्ने गर्छ । गर्भ रहेको महिनाको आधारमा यौन आसन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने सोहीअनुसारको सावधानी पनि अपनाउनु पर्छ । यौनसम्पर्कपछि रक्तश्राव, पेट दुखेमा, असहज महसुस भएमा, योनीबाट पानी बगेमा यौन सम्पर्क तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
शिशुलाई असर नगर्ने, बेहोस हुने समस्या हटाउने
स्वस्थ गर्भावस्थमा यौन सम्पर्क राख्दा गर्भको शिशुलाई असर नगर्ने चिकित्सकहरुले बताउने गरेका छन् । उनीहरुकाअनुसार भ्रुणको थैली र गर्भाशयका मांशपेशीले गर्भको शिशुलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भएकाले यौन सम्पर्कका कारण गर्भको बच्चामा असर गर्दैन ।
सेक्सका बेला उत्सर्जन हुने अक्सिटोसिन हर्मोनका कारण पति पत्नीबीचको सम्बन्ध आत्मीय तथा प्रेमपूर्ण बन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । गर्भावस्थामा हुने यौन सम्पर्कले महिलालाई चिन्तामुक्त गराउने र पर्याप्तमात्रा निद्रा पर्ने र रक्तचाप सन्तुलित गर्न सहयोग गर्छ ।
गर्भावस्थामा बेहोस हुने समस्याबाट पीडित गर्भवती महिलालाई यस समयमा हुने यौन सम्पर्क लाभदायक बन्न सक्छ । यस समस्याबाट पीडित महिलाहरुका लागि पुरुषको वीर्यमा हुने प्रोटिनले फाइदा गर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । उनीहरुकाअनुसार वीर्र्यले महिलामा विशेष एन्टीबडी उत्पादन गरी गर्भावस्थामा बेहोस हुने समस्या कम गर्छ ।
गर्भमा रहेको बच्चालाई असर नगर्ने गरी पेटलाई दबाब सृजना नहुने गरी यौन सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उचित यौन आसन चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, गर्भ रहेको सुरुको तीन महिना र अन्तिमको एक महिना यौन सम्पर्क नराख्दा नै राम्रो हुन्छ । अन्य सामान्य अवस्थामा वा गर्भवती महिलामा कुनै असहज अवस्था नरहेको खण्डमा यौन सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
माघ १२, २०७७ सोमवार २१:०५:१० बजे : प्रकाशित
# गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क
बच्चासँग सुत्नु आमाका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ
काठमाडौँ। आमा र बच्चाको सम्बन्ध संसारकै अनमोल सम्बन्ध मानिन्छ । आमाले आफ्ना बच्चालाई जब स्तनपान गराउँछिन्, बच्चासँगै सुत्छिन् यी दुईको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुन्छ । आमासँग बच्चा सुत्दा बच्चालाई मात्र होइन, आमालाई पनि निकै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तर विभिन्न अध्ययनले आमालाई धेरै फाइदा हुने देखाएको हो ।
के के हुन्छ फाइदा ?
- सुत्ने बेला आफूसँग आमाबाबु हुन्छन् भने बच्चाले आफूलाई निकै सुरक्षित महसुस गर्छन् । एक्लै सुत्दा बच्चाले असुरक्षित महसुस गर्ने गर्छन् । एक्लै सुत्दा बच्चा बीचमै उठ्ने भएकाले निद्रा पूरा गर्न पाउँदैनन् ।
- समयमै सुत्ने गर्दा निद्रा पूरा मात्र हुँदैन, स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ । बच्चालाई स्वस्थ बनाइराख्न पनि समयमै आमाबाबुले बच्चासँग सुत्ने गर्नुपर्छ ।
- एक अध्ययनअनुसार आफूसँग आमाबाबु सुतेमा बच्चाहरूले आत्मसम्मानको महसुस गर्छन् । जसले व्यावहारिक समस्या सुल्झिँदै जान्छ । आफ्ना साथीहरूको दबाबमा रहँदैनन्, आफैं खुसी र सन्तुष्ट हुन्छन् ।
- यदि तपाई बच्चासँगै सुत्नुभयो भने दिनभरि कसरी बित्यो, के के ग¥यौ, अघिल्लो दिनको प्लानिङ कस्तो छ भनेर सजिलै सोध्न सक्नु हुन्छ । यसो गर्दा बच्चाहरूले तपाईलाई आफ्नो मनको सबै कुरा निर्धक्क बताउने गर्छन् र आरामले निदाउने गर्छन् ।
- आफ्नो बच्चसँग सुत्दा नर्सिङ पेसामा आबद्ध आमाहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ । उनले निकै आरामको महसुस गर्छिन् । आफ्नो विस्तारा छोडेर बारम्बार बच्चालाई हेर्न जानुपर्दैन ।
- यदि बच्चाले सुत्ने बेला आमाबाबुसँग कथा भन्नुस् न भनेमा त्यो नराम्रो होइन, उनीहरूले सुत्न नचाहेको भन्ने बुझ्नु हुन्न । दिनभर आमाबाबु काम गर्दा थाकेका हुन्छन्, सँगै समय बिताउन नसक्ने भएकाले सँगै सुत्ने बेला उनीहरूले कथा भन्नुस् न भनेका हुन्छन् । यसो गर्दा बच्चा र आमाबाबु दुवै मज्जाले निदाउन सक्छन्
माघ ११, २०७७ आइतवार १५:३०:४७ बजे : प्रकाशित
प्रयोग गरेको टी ब्यागलाई नफ्याली, यसरी गर्नुहोस् पुन:प्रयोग
काठमाडौँ। अधिकांश मासिन चियाको चुस्कीबाट दिनको सुरुवात गर्छन् । धेरैजसो त ओछ्यानमा चिया नपिएसम्म उठ्नै मान्दैनन् । दैनिक ६–७ कप चिया पिउनु सामान्य भइसकेको छ । चिया बनाउन धेरै मानिस टी ब्यागको प्रयोग गर्छन्, चिया पकाइसकेपछि फाल्दिहाल्छन् । उनीहरू एकपटक चिया बनाइसकेपछि टी ब्याग बर्बाद हुने तर्क गर्छन् । असलमा त्यो सत्य होइन । एकचोटि प्रयोग गरिसकेको टी ब्याग फेरि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
फ्रिजको दुर्गन्ध हटाउँछ
दिनहुँ फ्रिजको सफाइ नगर्नाले गन्ध आउँछ । यसको गन्ध हटाउन टी ब्याग धेरै सहयोगी हुन सक्छ । प्रयोग गरिसकेको टी ब्याग फ्रिजमा राखिदिएमा केही क्षणमा गन्ध हराउँदै जान्छ ।
ग्रिन टी या पेपरमिन्ट जस्ता टी ब्यागले तपाई आफ्नो नेचुरल माउथवास पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । माउथवास बनाउन टी ब्यागलाई तातो पानीमा डुबाउने र बाहिर राख्ने । एकछिनमै माउथवास तयार हुन्छ ।
सिसा या ऐनामा भएको दाग र धब्बा टी ब्यागबाट हटाउन सकिन्छ । प्रयोग गरिसकेको टी ब्याग झ्याल या ड्रेसिङ टेबुलको सिसामा हातले रगड्ने । यसो गर्दा सिसा पहिलेकै जस्तो नयाँ हुन्छ ।
मुसा भगाउन सकिन्छ
मुसाले घरमा गन्धका साथै विभिन्न सामानलाई फोहोर बनाउँछ । मुसा हटाउन मानिसहरु के के मात्र गर्दैनन् ? तर, धेरैलाई टी ब्यागबाट मुसालाई हटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा छैन । टी ब्यागमा पेपरमिन्ट तेल अलिकति हाल्नुहोस् । यसबाट मुसा, माकुरो मज्जाले हटाउन सकिन्छ ।
काठको फर्निचर या फर्स चम्काउन टी ब्यागलाई तातो पानीमा उमाल्ने र केही छिन चिसो हुन दिने । चिसो भएपछि त्यो पानीमा नरम कपडा डुबाउने र फर्निचर सफाइ गर्ने ।
माघ ८, २०७७ बिहिवार १८:२७:२३ बजे : प्रकाशित
# टी ब्याग
यसरी आउंदैछ भारतबाट कोरोनाविरुद्धको खोप नेपालसम्म
काठमाडौं । भारतले नेपालका लागि दिएको १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप आज नेपाल आईपुग्दैछ । भारत सरकारका अनुसार नेपालको लागि छुट्याइएको खोप आज बिहान एयर इन्डियाको जहाजमा लोड गर्न सुरु गरिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत तस्विरहरु सार्वजनिक गर्दै खोप लोड गरिएको र अब नेपाल तर्फ उड्न तयारी रहेको जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपाललाई खोप सहयोग गर्ने जनाएको थियो ।
माघ ८, २०७७ बिहिवार ११:३२:०४ बजे : प्रकाशित
# कोरोना खोप नेपालमा